Firy ny endrika hita ao amin'ny mailaka farany anao? | Martech Zone
Firy ny tarehy amin'ny mailaka farany anao?
Alarobia 3, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Mahazo mailaka maherin'ny 100 mifandraika amin'izany aho isan'andro… fantatro fa somary manelingelina izany. Manelingelina indrindra rehefa tena tsy dia misy dikany ilay mailaka. Toy izany ny tranga amin'ireo mailaka LinkedIn ireo izay milaza amiko ny momba ireo olona ao amin'ny tambajotranoko izay nanova ny lohatenin'ny asa. Tsy vitako ny tsy mijery ny tarehy sy ny tsindrio raha hijery izay mitranga amin'ireo olona ireo sy ny asany. Azoko antoka fa ity mailaka LinkedIn ity dia iray amin'ireo taha ambony amin'ny click-through farany amin'ny indostrian'ny mailaka.
Mahazo mailaka tontolo andro avy amin'ny tambajotra sosialy misy ny anarana sy ny fanovana ny satan'ny olona ao anatiny aho, saingy tsy dia mihady lalina kokoa aho. Rehefa misy sary anefa dia milay saina avy hatrany aho ary mila tsindrio. Mampanontany tena ahy… efa nahita antontan'isa momba ny CTR mailaka misy sary (fa tsy sary stock) olona ve ianao? Ny vinavinako dia raha mametraka a tena tarehy amin'ny mailakao, mety hahazo ianao valiny tena izy.
Media sosialy sy fahombiazana: fanapahana vs fanitarana
Media sy orinasa sosialy
Aug 4, 2011 amin'ny 7: 15 AM
Te hilaza sary amin'ny sonia ve ianao?
4 Aogositra 2011 amin'ny 8:04 PM
Angamba amin'ny sonia, Kenneth! Mieritreritra aho fa mahasarika foana ny sarin'ny olona - mahasarika kokoa noho ny lahatsoratra.
Aug 5, 2011 amin'ny 12: 06 AM
Sary sonia angamba! Heveriko fa mety tsy maintsy mikorisa ambany ny olona noho izany. Manontany tena aho raha manampy fotsiny na tsia ny sarin'ny mpanjifa na ny mpiasa amin'ny alàlan'ny fanatontosana ny mailaka iray ary hahasarika kokoa ny mpamaky izany. Zavatra mety ilaintsika tsapaina izany!